တောင်ဒဂုံပစ်ခတ်မှုတရာခံရဲ့ကားတွေ့ပြီ ****************************ေ
ဇေယျာသူရ8:56:00 AM တောင်ဒဂုံပစ်ခတ်မှုတရာခံရဲ့ကားတွေ့ပြီ **************************** ​တောင်​ဒဂုံမြို့နယ်​မှာ ထွက်ေ...Read More
တရားခံပြေး နဂါးလေး လွှတ်မြှောက်နေဆဲ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့သဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အပူတပြင်း လိုက်လံ ဖမ်းဆီး
ဇေယျာသူရ7:31:00 AM လွတ်သွားတဲ့ နဂါး ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေ နဂါးလေး(ခ)အောင်နိုင်မြင့်၊ (၃၄)နှစ်၊ (ဘ)ဦး...Read More
တောင်ဒဂုံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပစ်ခတ်မှုနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အပြည့်အစုံ =============================
ဇေယျာသူရ7:03:00 AM == မူးယစ်ဆေးဝါးမှု၊ လုယက်မှုများဖြင့် တရားခံပြေးကြေငြာထားသူအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရ...Read More
on 7:03:00 AM
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလွတ်စုံထောက်လုပ်ငန်းစလိုက်တာနဲ့ အရင်ဆုံး လာအပ်ထားတဲ့ အမှုတွေက လင်မယားချင်း စိတ်မချလို့ စောင့်ကြည့်ပေးဖို့ အပ်နှံမှု ငါးမှု၊ လင်ပျောက်မှုနှစ်မှု၊ မယားပျောက်မှုတစ်မှု အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
ဇေယျာသူရ6:40:00 PM မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ အလွတ်စုံထောက်လုပ်ငန်းကုမ္မဏီစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစ...Read More
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု လေဆိပ်စီစီတီဗွီမှတ်တမ်းတွေ့ရှိချက် ဒုရဲမှူးကြီး ထုတ်ဖော် (ရုပ်သံ) ဇေယျာသူရ6:17:00 PM ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်က ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥပေ...Read More
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှု လေဆိပ်စီစီတီဗွီမှတ်တမ်းတွေ့ရှိချက် ဒုရဲမှူးကြီး ထုတ်ဖော် (ရုပ်သံ) Reviewed by ဇေယျာသူရ
ရက်ရက်စက်စက် အသက်ခံရသော သူနာပြုဆရာမလေး အကောင့်ထဲက photoထဲပုံများ ဇေယျာသူရ12:32:00 AM
ရက်ရက်စက်စက် အသက်ခံရသော သူနာပြုဆရာမလေး အကောင့်ထဲက photoထဲပုံများ Reviewed by ဇေယျာသူရ
သူနာပြုဆရာမငယ် ဓါးချက်ပေါင်းများစွာ နှင့် အသက်ခံရ အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
ဇေယျာသူရ12:06:00 AM အမျိုးသမီးငယ် တစ်ဦး နေအိမ် ဆိုင်အတွင်း ဓားအချက်ပေါင်းများစွာဖြင့် သတ်ခံရ ================...Read More
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု သံသယရှိသူများ ထပ်မံဖမ်းဆီး ...?
ဇေယျာသူရ4:53:00 PM တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုရဲက နောက်ကွယ်က ကွင်းဆက်တရားခံလို့ သံသယရှိသူတွေကို...Read More
on 4:53:00 PM
ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်တွင် အ၀တ်ဗလာအမျိုးသမီးအလောင်း တွေ့ရှိ ဇေယျာသူရ4:40:00 PM ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်မြို့ မအူပင်တံတားအောက်မှာ ဒီကနေ့မနက်က အ၀တ်မပါ အမျိုးသမီး တဦး အလောင်းတလောင်း...Read More
ဧရာဝတီတိုင်း မအူပင်တွင် အ၀တ်ဗလာအမျိုးသမီးအလောင်း တွေ့ရှိ Reviewed by ဇေယျာသူရ
ကြည်လင်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေ အွန်လိုင်းပေါ် ကျိုးပေါက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို စစ်ဆေးနေဟုဆို ဇေယျာသူရ9:20:00 PM ဦးကိုနီကို လုပ်ကြံခဲ့သူ ကြည်လင်းကို ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းမှာ ကနဦး ထွက်ဆိုချက်တွေ အွန်လိုင်...Read More
ကြည်လင်းရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေ အွန်လိုင်းပေါ် ကျိုးပေါက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို စစ်ဆေးနေဟုဆို Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဘာသာရေး ကွဲလို့ အသတ်ခံရတယ်လို့ မယူဆကြောင်း မန္တလေး မွတ်ဆလင် ခေါင်းဆောင် ပြော ဇေယျာသူရ5:47:00 AM ရှေ့နေကြီး ဦးကိုနီဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ဝတ်ပေး ခံထားရတဲ့ ညစ်ထေးနေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အင်္ကျီကြီးကို ချွတ်...Read More
ဘာသာရေး ကွဲလို့ အသတ်ခံရတယ်လို့ မယူဆကြောင်း မန္တလေး မွတ်ဆလင် ခေါင်းဆောင် ပြော Reviewed by ဇေယျာသူရ
တစ်ပွင့်နဲ့ ဗိုလ်လေး (လေဆိပ်လုံခြုံရေးရဲ) က လူသတ်သမားကို သေနတ်နဲ့ ပစ်လိုက်ရင် ကိုနေဝင်း မသေဘူး၊ ဟု ဂယက်ခက်
ဇေယျာသူရ5:32:00 AM ရန်ကုန်လေဆိပ်နှင့် ပတ်သက်ဖူးသူ၊ ဝင်ထွက်ဖူးသူ အများစုသည် လေဆိပ် တက္ကစီမောင်းသူများကို နာမည်ဆိုးဖြင...Read More
on 5:32:00 AM
ကြံရာပါလှုပ်ရှားသူများကို မှန်းဆနိုင်မယ့်သုံးသပ်မှု အပြည့်အစုံကြည့်ရန်
ဇေယျာသူရ10:16:00 PM CCTV ရဲ့ မှတ်တမ်းထဲမှာ ဒီလုပ်ကြံမှုနဲ့ ပါဝင်ပါတ်သက်နေတဲ့ ကြံရာပါတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ အများကြီးအထော...Read More
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုအပေါ် အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်မှုမပြုရန် အန်အယ်လ်ဒီ တိုက်တွန်း ဇေယျာသူရ10:07:00 PM အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုဥပဒေအထောက်အပြုအဖွဲ့ဝင် ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရတဲ့အပေါ်မှာ အဖွဲ့ဝ...Read More
ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုအပေါ် အလွန်အကျွံ တုံ့ပြန်မှုမပြုရန် အန်အယ်လ်ဒီ တိုက်တွန်း Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဦးကိုနီကို သတ်ဖြတ်သူရဲ့ နောက်ကွယ် ကြိုးကိုင်သူ ရှိနေပြီလား ?
ဇေယျာသူရ8:11:00 PM လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင် တွေ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်မှာ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံ ခံရ။ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစ...Read More
on 8:11:00 PM
ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်ဖို့လာတဲ့ အဓိကတရာခံ လွတ်မြောက် မလား ဖမ်းခံရပြီလား ဇေယျာသူရ8:05:00 PM _____ ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်ဖို့လာတဲ့ အဓိကတရာခံ လွှတ်မြောက် - ဦးကိုနီကို လက်ရှိသတ်တဲ့ တရာခံက ကြေးစား...Read More
ဦးကိုနီကို ပစ်သတ်ဖို့လာတဲ့ အဓိကတရာခံ လွတ်မြောက် မလား ဖမ်းခံရပြီလား Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 8:05:00 PM
တရားခွင်မှာ အမှုစစ်နေရင်း ရှေ့နေတစ်ဦးလဲကျသေဆုံး
ဇေယျာသူရ3:40:00 AM မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မိုးကုတ်မြို့နယ် တရားရုံးတရားခွင်မှာ အမှုစစ်ဆေးနေတဲ့ တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးေ...Read More
on 3:40:00 AM
ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကြားက သွေးစွန်းနေသော စာရွက်လေး ( ရင်နင့်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ် ) ဇေယျာသူရ6:59:00 PM ဆရာမ သမီးမခိုးပါဘူး " " သမီးမခိုးရင် ဒီစာအုပ်က ဘယ်လိုလုပ် သမီးလွယ်အိတ်ထဲ ရောက်နေတာလဲ &...Read More
ဒိုင်ယာရီ စာအုပ်ကြားက သွေးစွန်းနေသော စာရွက်လေး ( ရင်နင့်ဖွယ်ရာဖြစ်ရပ် ) Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဖေ့စ်ဘုတ်နှင့် မျက်မြင်သက်သေများ၏ ဖိအားပေးရေးသားမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်၍သာ ၎င်းမောင်းခဲ့ကြောင်းအမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လိမ်လည်ထွက်ဆိုဝန်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ် ဇေယျာသူရ1:34:00 AM ယခုဖြစ်ပွါးခဲ့သော ဖြစ်စဉ်တွင် အမှန်တကယ် ယာဉ်တိုက်မှု့ကြောင့် ဦးဝင်းထွန်းပါ (၈) ဦးမှာ သေဆုံးခဲ့...Read More
ဖေ့စ်ဘုတ်နှင့် မျက်မြင်သက်သေများ၏ ဖိအားပေးရေးသားမှုဒဏ်ကို မခံနိုင်၍သာ ၎င်းမောင်းခဲ့ကြောင်းအမြန်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့ထံ လိမ်လည်ထွက်ဆိုဝန်ခံလိုက်ရခြင်းဖြစ် Reviewed by ဇေယျာသူရ
ဆူးလေမှာ ပွဲတွေကြမ်းကုန်ပြီတဲ့..။ နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့..။ ဇေယျာသူရ7:30:00 PM ဆူးလေမှာတော့ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်း ပွဲကြမ်းကုန်ပြီ(ဗီဒီယိုဖိုင်တော့မတင်တော့ပါဘူး။) ဖြစ်စဉ်က ရန်ကုန်ဘ...Read More
ဆူးလေမှာ ပွဲတွေကြမ်းကုန်ပြီတဲ့..။ နှိပ်ကြည့်လိုက်တော့..။ Reviewed by ဇေယျာသူရ